မြန်မာနိုင်ငံဖွား အိန္ဒိယသမ္မတကတော် (First Lady) နှစ်ဦးက ဘယ်သူတွေလဲ
13 Mar 2018 . 4:52 PM
နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ပြီးမှ သမ္မတကတော် (First Lady) ဖြစ်သွားကြတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးတယ်၊ အိမ်နီးနားချင်း နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ပြီး သမ္မတကတော်ဖြစ်သွားကြတာပါ။ အခုဆောင်းပါးမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သမ္မတကတော်ဖြစ်သွားကြတဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအကြောင်းကို ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
(၁) ဂျနာကီ ဗန်ကာတာရာမန် (Janaki Venkataraman)
၁၉၂၁ခုနှစ်မှာ ဂျနာကီ ဗန်ကာတာရာမန် (Janaki Venkataraman) ကို ကာမာလာ (Kamala) နဲ့ ခရစ်ရ်နားအီရာ (Krishna Iyer) ဆိုတဲ့ ဟိန္ဒူမိဘနှစ်ပါးကနေ ပဲခူးမြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူမ (၅) နှစ်အရွယ်မှာ မိခင်ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက် အိမ်မှုကိစ္စတွေကို တာဝန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ (ဖခင်က နောက်အိမ်ထောင် မပြုခဲ့ပါဘူး။) ၁၉၃၈ခုနှစ်မှာ အာ ဗန်ကာတာရာမန် (R. Venkataraman) နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက သူမဟာ (၁၇) နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ခံယူလိုက်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး၊ ကျားမတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ တိရစ္ဆာန်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတကြီး R. Venkataraman နဲ့ Janaki Venkataraman
ပိုးထည်ဝတ်ဆင်မှုကို အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ပြီး ဆာရီဝတ်ဆင်ရေးကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည် ‘အာ ဗန်ကာတာရာမန်’ ဟာ ၁၉၈၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၅) ရက်နေ့မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အဌမမြောက် သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါ သူမဟာ သမ္မတကတော် (First Lady) ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံခြားသား သမ္မတကတော်အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး တန်းတူရရှိရေးမှာ တက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ၂ဝ၁ဝခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
(၂) အာရှာ နာရာရန်နန် (Usha Narayanan)
အာရှာ နာရာရန်နန် (Usha Narayanan) ကို ၁၉၂၃ခုနှစ် ရမည်းသင်းမြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနာမည်က တင့်တင့် (Tint Tint) ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (B.A) ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာစာဌာနမှာ သရုပ်ပြဆရာမအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ Delhi School of Social Work တက္ကသိုလ်ကနေ မဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကေအာ နာရာရန်နန် (K. R. Narayanan) နဲ့ တွေ့ဆုံမိပြီး ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတကြီး KR Naryanan နဲ့ Usha Narayanan.
၁၉၅၁ခုနှစ် ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့မှာ ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ ဒေလီမြို့ (Delhi) မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ခံယူခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၅) ရက်နေ့မှာ ‘ကေအာ နာရာရန်နန်’ ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒသမမြောက်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့အချိန်မှာ ‘အာရှာ နာရာရန်နန်’ ဟာ သမ္မတကတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ဒုတိယမြောက် နိုင်ငံခြားသား သမ္မတကတော်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီး စာရေးဆရာကြီး သိန်းဖေမြင့်ရဲ့ဝတ္ထုတိုတွေကို ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ သမီးနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
အခုဖော်ပြခဲ့တာတော့ မြန်မာပြည်ဖွား အိန္ဒိယသမ္မတကတော်နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ဖော်ပြထားတာမို့ အားလုံးသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံဖှား အိန်ဒိယသမ်မတကတျော (First Lady) နှဈဦးက ဘယျသူတှလေဲ
နိုငျငံခွားသားတဈယောကျနဲ့ လကျထပျပွီးမှ သမ်မတကတျော (First Lady) ဖွဈသှားကွတဲ့သူတှေ ရှိပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ မှေးတယျ၊ အိမျနီးနားခငျြး နိုငျငံရေးသမားတဈယောကျနဲ့ လကျထပျပွီး သမ်မတကတျောဖွဈသှားကွတာပါ။ အခုဆောငျးပါးမှာတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ မှေးဖှားပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ သမ်မတကတျောဖွဈသှားကွတဲ့ အမြိုးသမီးနှဈဦးအကွောငျးကို ဗဟုသုတဖွဈဖှယျ ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
(၁) ဂနြာကီ ဗနျကာတာရာမနျ (Janaki Venkataraman)
၁၉၂၁ခုနှဈမှာ ဂနြာကီ ဗနျကာတာရာမနျ (Janaki Venkataraman) ကို ကာမာလာ (Kamala) နဲ့ ခရဈရျနားအီရာ (Krishna Iyer) ဆိုတဲ့ ဟိန်ဒူမိဘနှဈပါးကနေ ပဲခူးမွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ သူမ (၅) နှဈအရှယျမှာ မိခငျဆုံးပါးသှားတဲ့အတှကျ အိမျမှုကိစ်စတှကေို တာဝနျယူခဲ့ရပါတယျ။ (ဖခငျက နောကျအိမျထောငျ မပွုခဲ့ပါဘူး။) ၁၉၃၈ခုနှဈမှာ အာ ဗနျကာတာရာမနျ (R. Venkataraman) နဲ့ လကျထပျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက သူမဟာ (၁၇) နှဈသာ ရှိပါသေးတယျ။ နိုငျငံရေးသမားနဲ့ လကျထပျခဲ့ပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံသား ခံယူလိုကျပါတယျ။ လူ့အခှငျ့အရေး၊ ကြားမတနျးတူညီမြှရေးနဲ့ တိရစ်ဆာနျအရေး တကျကွှလှုပျရှားသူအဖွဈ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
သမ်မတကွီး R. Venkataraman နဲ့ Janaki Venkataraman
ပိုးထညျဝတျဆငျမှုကို အပွငျးအထနျကနျ့ကှကျပွီး ဆာရီဝတျဆငျရေးကိုသာ ရှတေ့နျးတငျခဲ့ပါတယျ။ ခငျပှနျးသညျ ‘အာ ဗနျကာတာရာမနျ’ ဟာ ၁၉၈၇ခုနှဈ ဇူလိုငျလ (၂၅) ရကျနမှေ့ာ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ အဌမမွောကျ သမ်မတဖွဈလာတဲ့အခါ သူမဟာ သမ်မတကတျော (First Lady) ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးနိုငျငံခွားသား သမ်မတကတျောအဖွဈ ထငျရှားခဲ့ပါတယျ။ အမြိုးသမီးအခှငျ့အရေး တနျးတူရရှိရေးမှာ တကျကွှလှုပျရှားခဲ့ပွီး ၂ဝ၁ဝခုနှဈ သွဂုတျလ (၁၃) ရကျနမှေ့ာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
(၂) အာရှာ နာရာရနျနနျ (Usha Narayanan)
အာရှာ နာရာရနျနနျ (Usha Narayanan) ကို ၁၉၂၃ခုနှဈ ရမညျးသငျးမွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာနာမညျက တငျ့တငျ့ (Tint Tint) ဖွဈပါတယျ။ ရနျကုနျတက်ကသိုလျက ဝိဇ်ဇာဘှဲ့ (B.A) ရရှိခဲ့ပွီး မွနျမာစာဌာနမှာ သရုပျပွဆရာမအဖွဈ အမှုထမျးခဲ့ပါသေးတယျ။ ပညာသငျဆုရရှိခဲ့ပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံ Delhi School of Social Work တက်ကသိုလျကနေ မဟာဘှဲ့ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ရနျကုနျမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ ကအော နာရာရနျနနျ (K. R. Narayanan) နဲ့ တှဆေုံ့မိပွီး ခဈြကွိုးသှယျခဲ့ပါတယျ။
သမ်မတကွီး KR Naryanan နဲ့ Usha Narayanan.
၁၉၅၁ခုနှဈ ဇှနျလ (၈) ရကျနမှေ့ာ ခဈြသူနှဈဦးဟာ ဒလေီမွို့ (Delhi) မှာ လကျထပျခဲ့ပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံသား ခံယူခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၉၇ခုနှဈ ဇူလိုငျလ (၂၅) ရကျနမှေ့ာ ‘ကအော နာရာရနျနနျ’ ဟာ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ဒသမမွောကျသမ်မတဖွဈလာခဲ့အခြိနျမှာ ‘အာရှာ နာရာရနျနနျ’ ဟာ သမ်မတကတျောဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ ဒုတိယမွောကျ နိုငျငံခွားသား သမ်မတကတျောအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပွီး စာရေးဆရာကွီး သိနျးဖမွေငျ့ရဲ့ဝတ်ထုတိုတှကေို ဘာသာပွနျထုတျဝခေဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ သမီးနှဈယောကျထှနျးကားခဲ့ပွီး ၂ဝဝ၈ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ (၂၄) ရကျနမှေ့ာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
အခုဖျောပွခဲ့တာတော့ မွနျမာပွညျဖှား အိန်ဒိယသမ်မတကတျောနှဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ ဗဟုသုတဖွဈဖှယျ ဖျောပွထားတာမို့ အားလုံးသဘောကလြိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။